theZOMI: [moemakadaily@moemaka.biz] 8th April - MoeMaKa Daily
[moemakadaily@moemaka.biz] 8th April - MoeMaKa Daily
ဧပြီ ၈၊ ၂၀၁၃ (ပန်းချီဆရာကို ဒီကနေ ခွင့်တောင်းလိုက်ပါ၏၊ မိုးမခမှာ ဖော်ပြခွင့်)
Posted by Maung Yit at 11:08 PM0comments
ဧပြီ (၆)ရက်နေ့က ရန်ကုန်ကို ပြန်ရောက်တယ်။ သိကြတဲ့အတိုင်းပဲ အေးတဲ့နိုင်ငံများကနေ မြန်မာ ပြည်ကို ပြန်လာသူတိုင်း ကြုံလေ့၊ ကြုံထရှိတဲ့ အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခု။ လေယဉ်ပေါ်ကအထွက် လေဆိပ်ထဲကို တန်းမရောက်နိုင်ပဲ လှေခါးမှဆင်းပြီး စောင့်ကြိုနေတဲ့ ကားပေါ်ကို တက်ရတယ်။ ဒီအခါမှာ ပူလောင်လှတဲ့ ရာသီဥတုဒဏ်က ရုတ်တရက်ကြီးဆိုတော့ အတော်ကို ပူတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ တချို့များဆို ရွှေလင်းပန်းနှင့် ချင်းဆေးထားတဲ့ ဘုရင့်သားလေးတွေ၊ သမီးလေးတွေပမာ ဆွေ့ဆွေ့ခုံပြီး သူတို့ပဲ အပူဒဏ်ကို ခံစားနေရသလို အမူအရာမျိုးနဲ့ပေါ့။ ဘယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ - ပူနိုင်ရန်ကော မြန်မာပြည်ကြီး ရယ်ပေါ့ … ။
စာရေးသူကတော့ အများတွေးသလို မတွေးချင်ပါ။ စာရေးသူ တွေးမိတာက မြန်မာတွေအတွက် ကိုယ့်နိုင်ငံကို ပြန်မလာခင်ကတည်းက ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို တစ်နည်းမဟုတ်၊ တစ်နည်းနည်းဖြင့် ကျေးဇူးပြု ခွင့်ရတာ ၀မ်းသာစရာတစ်မျိုးပဲလို့ ပြုံးပြုံးလေး တွေးမိမှာပါ။ ဂျွန်ကနေဒီရဲ့ စကားလေးကို ဒီနေရာမှာ ဆက်စပ်တွေးယူမယ်ဆိုရင်တော့ - "တိုင်းပြည်က ငါ့အတွက် ဘာလုပ်ပြီးပြီလဲ မမေးနဲ့ ငါက တိုင်းပြည်အတွက် ဘာလုပ်ပြီးပြီလဲ မေးပါ"ဆိုတဲ့ စကားလေးကို အမှတ်ရနေမိလို့ပါ။ အခုလို ကြည်ကြည်ဇြုဖြူနဲ့ (တချို့လည်း မကြည့်မဖြူနဲ့) မြန်မာပြည်ကို ပြန်မလာခင်ကတည်းက ဗီဇာလျှောက်ပြီး တိုင်းပြည်အတွက် အုဋ္ဌ်တစ်ချပ်၊ သဲတစ်ပွင့်အနေမျိုးနှင့် ပြန်လည်ကျေးဇူးပြုနိုင်တယ်ဆိုတာ နည်းတဲ့အခွင့်ထူးမျိုးမှမဟုတ်တာ။ ဘာပဲဖြစ် ဖြစ်လေ တကယ်လို့များ အခုလို စေတနာစကားနှင့်ရေးတဲ့ ဒီလိုအရေးအသားမျိုးကြောင့် သင့်ဒေါသကို နှိုးဆွပေးလိုက်သလို ဖြစ်နေခဲ့မိရင် စာရေးသူအား နားလည်ပေးနိုင်ဖို့ပါ။
လေဆိပ်ကအတွက် လေဆိပ်ရဲ့ ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ အနည်းငယ်စိမ်းလန်းနေသေးတဲ့ သစ်ပင်များ ရှိရာသို့ ကားမှန်ပြူတင်းမှ လှမ်းမျှော်ကြည့်မိတယ်။ အဲဒီအခါမှာ တောစပ်ထဲရှိ သစ်ပင်တစ်ပင်ပေါ်မှ ပျံဝဲလာတဲ့ ငှက်ခါးတစ်ကောင်ကို အမှတ်မထင် တွေ့လိုက်ရတော့ … ။ စိတ်ထဲမှာ ပြုံးမိတယ်။ "ပျံလေတဲ့ငှက်ခါး နားမှသိမယ်" ဆိုတဲ့ မြန်မာတို့ ညွှန်ဆိုပြုထားတဲ့ ဆိုရိုးစကားလေးတစ်ခုကို အမှတ်မထင် သတိရမိလို့ပါ။ အပျံအနား ကျွမ်းကျင်လှတဲ့ ငှက်ခါးလို ငှက်မျိုးကို ငှက်မုဆိုးတို့ရဲ့ ကြုံးဝါးသံကို ပညာရှင်များက လောက ဖြစ်ပျက်ပုံနှင့် နှိုင်းခိုင်းပြီး ပြောဆိုထားတဲ့ စကားမျိုးပါ။ မိမိအပေါ်မှာ မလိမ်တစ်ပတ် လုပ်သွားတဲ့သူကို ရှာလို့မတွေ့နိုင်သေးတဲ့အခါမျုိးတွေ၊ ဖမ်းလို့မမိနိုင်သေးတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ "ပျံလေတဲ့ငှက်ခါး နားမှသိမယ်" ရယ်လို့ ကြုံးဝါးတတ်ကြခြင်းပါ။
ဟိုခေတ်၊ ဟိုအချိန်အခါမျိုးက အတိုက်အခံပြုလုပ်ရတာဟာ သိပ်ကို အဓိပ္ပါယ်ရှိနေခြင်းပါ။ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှာရှိတဲ့ (ရဟန်းသံဃာတော်များပါအ၀င်) ပြည်
သူ၊ ပြည်သားတွေဟာ မိမိတို့က အတိုက်ခံတွေပါဆို တာကို ပေါ်လွင်ထင်ရှားနိုင်စေရန် ရဲရဲတောက် အားမာန်တွေနှင့် စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တဲ့ စာတမ်းတွေကို မိမိတို့ရဲ့ ကျောပြင်တွေမှာဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် ရင်ဘတ်မှာဖြစ်စေ ချိတ်ဆွဲပြကြခဲ့ကြတာတွေ၊ သို့မဟုတ် နဖူးမှာဖြစ်စေ တင်းကျပ်နေအောင် စည်းထားပြီး တိုက်ပွဲခေါ်သံတွေအနေနဲ့ ကျွေးကြော်ခဲ့ကြတဲ့အသံတွေကို တဖန်နားစွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ယခုအချိန်အထိ ကြားယောင်နေမိကြမှာပါ။ "စစ်အာဏာရှင်များ ကျရှုံးပါစေ၊ ဒီမိုကရေစီစနစ် ပေါ်ထွန်းပါစေ" တဲ့။ ဆန္ဒတွေ ပြင်းထန်စွာနှင့် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ပြည်သူ၊ ပြည်သားတွေ ညီညီညွတ်ညွတ်နှင့် တစ်စိုက်စိုက်မတ်မတ်နှင့် တောင်းဆိုလာခဲ့ကြလို့ ယနေ့မြန်မာ နိုင်ငံတော်ကြီး၌ ဒီမိုကရေစီ တံခါးကြီးကို ဖွင့်ထားနိုင်ခဲ့သည်မှာ တစ်နှစ်နီးနီး ရှိခဲ့ပြီ။ ဒီမိုကရေစီတံခါးကြီးကို ဖွင့်ထားခြင်းဟာ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို မြတ်နိုးသူတိုင်း ၀င်နိုင်ထွက်နိုင်စေဖို့ ပြည်သူများဆန္ဒနှင့် ပြည်သူတွေ ဖွင့်ထားခဲ့ကြတာပါ။
ဒီတော့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို တောင်းဆိုခဲ့ကြတဲ့ ရဟန်းရှင်လူများကို သတိရစေချင်တာက အချိန် တွေဟာ ပြောင်းလဲခဲ့ပြီ။ အရွယ်တွေလည်း အိုမင်းခဲ့ပြီ။ အချိန်တွေ ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ၊ အရွယ်တွေ အိုမင်းလာသည်နှင့်အမျှ စိတ်နေစိတ်ထားမျာကိုလည်း ပြောင်းလဲသင့်ပြီ။ ပြောင်းလဲသင့်တဲ့ အရာမျိုးတွေ၌ွ ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းသည် အောင်မြင်မှုတစ်မျိုးဟု ဆိုနိုင်သည်။ သို့သော် ပြောင်းလဲသင့်တဲ့အရာကို (သို့မဟုတ်) သဘာဝတရားကို ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုလျှက် မပြောင်းလဲပဲ ဆုပ်ကိုင်မြဲ ဆုပ်ကိုင်ထားကြမည်ဆိုလျှင် ဇာတ်တော် ထဲက လူတစ်ယောက်လို ပညာရှိများ ကဲ့ရဲ့ဖွယ် (သို့မဟုတ်) အများအတွက် ရယ်ဖွယ်ရာများ ဖြစ်သွားနိုင်ခြင်းပါ။
ဇာတ်တော်ထဲမှာ - တစ်ခါက ရွာတစ်ရွာမှာ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဟာ စီးပွားရှာဖို့ ရွာကထွက်လာ ခဲ့ကြတယ်။ ခရီးအတော်အတန် သွားပြီးခြဲ့ကြတဲ့အခါမှာ ရွာပျက်ကြီးတစ်ရွာကို ရောက်သွားခဲ့ကြတယ်။ ရွာပျက် ကြီးထဲဝင်ပြီး ဟိုဟိုဒီဒီ ကြည့်ကြတော့ အ၀တ်ရက်လို့ ရနိုင်တဲ့ ချည်ထုပ်တွေကို တွေ့ကြရတယ်။ ဒီအခါမှာ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဟာ ၀မ်းသာအားရနှင့် ချည်ထုပ်တွေကို ထမ်းပြီး ခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ ခရီးအတော် အတန် ခရီးဆက်ခဲ့ကြတဲ့အခါ နောက်ထပ်ရွာပျက်ကြီးတစ်ရွာကို ရောက်ခဲ့ကြပြန်တယ်။ အဲဒီရွာပျက်ကြီးထဲမှာ ချုပ်လုပ်ပြီး အ၀တ်အထည်တွေကို တွေ့ကြရပြန်တယ်။ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ထဲက ပထမလူဖြစ်တဲ့ တစ်ယောက်လူက ချည်ထုပ်တွေကို စွန့်ပစ်ခဲ့ပြီး၊ အ၀တ်အထည်တွေကို ထမ်းနိုင်သမျှ ထမ်းယူခဲ့တယ်။
သို့သော် သူ့သူငယ်ချင်းတဲ့ ဒုတိယလူကတော့ - ဟေ့လူ ငါကတော့ ဒီချည်ထုတ်တွေကို အဝေးကြီးကနေ ထမ်းပြီးလာရလာတာဖြစ်လို့ ဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့မ ဒီချည်ထုတ်တွေကို ငါမစွန့်နိုင်ဘူးဆိုပြီး ချည်ထုပ်တွေကိုပဲ ဆက်လက်ထမ်းယူလာခဲ့တယ်။ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ခရီးဆက်ခဲ့ကြပြန်ရာ တစ်နေရာ ရောက်ပြန်တော့ နောက်ထပ် ရွာပျက်ကြီးတစ်ရွာကို တွေ့ကြရပြန်တယ်။ အဲဒီရွာပျက်ကြီးထဲကိုဝင်ပြီး ဟိုဟိုဒီဒီ ကြည့်ကြတဲ့အခါ ရတနာမျိုးစုံပါဝင်တဲ့ ပြန်ကျဲနေတဲ့ရွှေတွေကို တွေ့ကြရပြန်တယ်။ ပထမလူက အ၀တ်အထည် တွေကို စွန့်ပြီး ရတနာမျိုးစုံပါတဲ့ ရွှေထည်ပစ္စည်းတွေကို အထုတစ်ခုမှာထည့်ပြီး နိုင်သမျှထမ်းယူလာခဲ့တယ်။ သူ့သူငယ်ချင်းကိုလည်း ရွှေထည်ပစ္စည်းတွေကို နိုင်သမျှထမ်းယူလာဖို့ တိုက်တွန်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့သူငယ် ချင်းက လမ်းတစ်လျှောက်လုံး ထမ်းလာပြီးမှ အခုကြမှတော့ မစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီး ရွှေထည်ပစ္စည်းတွေကို မယူပဲ ချည်ထုပ်ကြီးကိုပဲ ဆက်လက်ထမ်းယူလာခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးအိမ်ပြန်ရောက်ကြတဲ့အခါ ရွှေထည်ပစ္စည်း တွေကို ထမ်းလာတဲ့ပထမလူဟာ ချမ်းသားသွားပြီး၊ ချည်ထုပ်တွေကို ထမ်းယူလာတဲ့ ဒုတိယလူကိုတော့ သားမယားတွေရဲ့ ပြစ်တင်ကဲ့ရဲမှုကို များစွာခံရပြီး ဆက်လက်ပြီး ဆင်းရဲမြဲ ဆင်းရဲနေခဲ့တယ်။
Posted by Maung Yit at 10:20 PM0comments
ဧပြီ ၇၊ ၂၀၁၃ - မိုးမခရေဒီယို ဆစ်ဒနီ
ဖန်တီးသူတို့ နှလုံးသားနဲ့ ကျနော့်ကျန်းမာရေးများ - ဦးပန်တျာ
ဦးဘုန်း ဓာတုရဲ့ အကောင်းဆုံး တနာရီ စာပေဟောပြောပွဲ
(မိုးမခပရိသတ်များက အသိပေးချင်တာက မိုးမခရေဒီယိုအစီအစဉ် တာဝန်ခံ ဦးပန်တျာနဲရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် နောင်တွင် ရေဒီယိုအစီအစဉ်များ အပြောင်းအလဲ အလျော့အတင်း ရှိပါလိမ့်မယ်။ သတင်းတာဝန်ခံ နှင်းမြတ်ခိုင်က တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မှုများ ရှိသလို အခြားပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိုးမခရေဒီယိုရဲ့ တာဝန်ခံ ဦးပန်တျာ အမြန်ဆုံး ကျန်းမာလာစေဖို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ကြပါစုို့။ ။)
(မိုးမခမှတ်ချက် - မိုးမခရေဒီယို (ဆစ်ဒနီ)အစီအစဉ်တွင် သတင်းထည့်သွင်းခြင်း၊ ကြော်ငြာများ ထည့်သွင်းခြင်းတို့အတွက် ဦးပန်တျာတို့ မိုးမခရေဒီယိုအဖွဲ့သို့upantra@gmail.com အီးမေးဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါကြောင်း)
Posted by Maung Yit at 6:28 PM0comments
ကိုထွန်းဝေ၊ (ဂျပန်)၊ ဧပြီ ၇၊ ၂၀၁၃
ယနေ့ တိုကျိုသင်္ကြန်ပွဲလုပ်ဖို့ ရုံးကလူတွေနဲ့ တိုကျိုသင်္ကြန်ပွဲကိုရောက်ခဲ့ ပါတယ်။တော်တော်လေး စည်ပါတယ်။ ကဲကြတဲ့သူတွေလည်း အများကြီးပဲ။ သောက်ကြ၊ ဆိုကြ၊ တီးကြ၊ကကြ နဲ့ပေါ့။ ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။
(၂၂)ကြိမ်မြောက် မြန်မာရိုးရာ တိုကျိုအတာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကို ဧပြီလ(၇)ရက်နေ့ တိုကျိုမြို့HIBIYA ပန်းခြံမှာ နံနက် ၁၀း၃၀ နာရီ မှ ညနေ ၅း၀၀ နာရီအထိ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(LDB) မှတာဝန်ယူ ဦးစီး၍ စည်းကား သိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အတာသင်္ကြန်ပွဲတော်ဖွင့်ပွဲအစီအစဉ်ကို ရိုးရာမပျက် မြန်မာများ တက်ရောက်ခဲ့တဲ့အပြင် ဂျပန်မှာရှိကြတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေလည်း တွေ့ ခဲ့ရပါတယ်။ အခြားနိုင်ငံခြားသားများလည်း တွေ့ ခဲ့ရပါတယ်။တိုကျိုမှာတော့ သင်္ကြန်ပွဲကို မြန်မာ့ရိုးရာ အစားအစာတွေနဲ့စုံစုံလင်လင် ရောင်းချပေးတာတွ့ရပါတယ်။
မြန်မာလူမျိုးတွေအများကြီး အခုလိုစုစည်းတဲ့ပွဲမျိုးကို ရောက်တော့ မြန်မာပြည်ကိုပြန်ချင်စိတ်တွေ၊ လွမ်းတဲ့စိတ်တွေပိုဖြစ်လာတယ်။ တေးဂီတအစီအစဉ်တွေမှာတော့အငြိမ့် ၊ မင်္ဂလာဒိုးသံချပ်နဲ့အခြားတီးဝိုင်းတွေ တော်တော်စုံလင်ပြီး မိုးလင်းမှ မိုးချုပ်အထိဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်။ဘ၀သရုပ်ဖေါ်တွေကို ထိထိမိမိ တင်ဆက် ဖျော်ဖြေသွားခဲ့ရာဂျပန်ရောက်ပရိတ်သတ်များ အထူးနှစ်ခြိက်အားပေးခဲ့ကြတာကို မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့ ရပါတယ်။အစားအစာများကတော့ စုံလင်တော့ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ ရမှာပါ။ အစားအသောက်ဆိုင်များအားလုံးနီးပါး ရောင်းအားများ ကောင်းခဲ့ကြပါတယ်.ဂျပန်နိူင်ငံမှာ မြန်မာလူမျိုးများဦးစီးကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပွဲတော်များအနက် အစည် ကားဆုံးပွဲ ဖြစ်ကြောင်းရေးသားလိုက်ရပါတယ်.။
သတင်း - ဓါတ်ပုံ ဗွီဒီယို ကိုထွန်းဝေ။ 7.4.2013
Posted by Maung Yit at 4:52 PM0comments
Posted by Maung Yit at 4:17 PM0comments
Posted by Aung Htet at 7:54 AM0comments
Labels: ကာတွန်း - ကျော်သူရိန်
၁၉၃၄ ခုနှစ် မေလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ဆရာတော် ဖူဂျီအိစံထံမှ 'ကောဂျီအင်နိကျိအောဂျောဂျင်"ဟူသော ဘွဲ့တံဆိပ် ကို ခံယူပြီးနောက် နာဂါအိစံသည် နိချိရင်းဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကို ပင့်ဆောင်လျက် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိခဲ့လေသည်။
နာဂါအီစံသည် ၁၉၄၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဗြိတိသျှအစိုးရ၏ ပြည်နှင်ဒဏ်ခံခဲ့ရပြီးနောက် "မြန်မာ့ ငရဲခန်း မှတ်တမ်း" အမည်ပေးထားသော စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ရေးသားခဲ့လေသည်။ ၁၉၄၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သောကြောင့် နာဂါအီစံ ဒုတိယအကြိမ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်သွားသည့် ၁၉၄၂ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ အလယ်ပိုင်းအကြား တိုတောင်းလှသော ၂လတာကာလအချိန်အတွင်း ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤစာအုပ်မှာ နာမည်ပေး ထားသည့်အတိုင်း အင်းစိန်ထောင်တွင်း၌ ၇၂ ရက်ကြာ အစာငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့သည့် ငရဲတမျှ အတွေ့အကြုံများကို အခြေခံ၍ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဘုန်းတော်ကြီး နာဂါအီစံနှင့် ပတ်သက်၍ "အောတခုဆိုးအိကျိ" ရေးသားသော 'စီးဆင်းနေသော မီးတောက်များ' စာအုပ်ထဲတွင် -
"မြန်မာနိုင်ငံ၌ စစ်ကြီးမဖြစ်ပွားမီ နှစ်အတော်များများကပင် ဂျပန်နိုင်ငံ ဆန်းမြောဟောဂျီဘုရားကျောင်းမှ နာဂါအီစံ သည် ယပ်တောင်နှင့် စည်ကလေးတစ်လုံးကို တီးခတ်ကာ တစ်အိမ်တက်တစ်အိမ်ဆင်း ၀င်ထွက်သွားလာနေခဲ့ပေသည်။ တစ်ဖက်မှလည်း ကုန်သည်ယောင်၊ သတင်းထောက်ယောင်ဆောင်ထားကြသော ဂျပန်သူလျှိုများကို သတင်းစုဆောင်း၍ အကူအညီများစွာ ပေးခဲ့ပေသည်။ ယခုအခါ မြန်မာအမျိုးသားခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပါအ၀င် ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်များအား ဂျပန်နိုင်ငံသို့ တိတ်တဆိတ်ပို့ဆောင်၍ စစ်ပညာသင်ကြားနိုင်ရန် စီမံပေးခဲ့သူမှာလည်း နာဂါအီစံပင် ဖြစ်ပေသည်" ဟူ၍ ရေးသားထားမှုကြောင့် သူသည် စပိုင်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း အတိအကျ ပြောနိုင်ပေသည။်
ထို့အပြင် စစ်အတွင်း ဂျပန်ရုပ်သေးအစိုးရတွင် အဓိပတိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဒေါက်တာဘမော် ရေးသားခဲ့ သည့် 'ရုန်းထွက်ခဲ့ရသော မြန်မာနိုင်ငံ' (Breakthrough in Burma) စာအုပ်ထဲတွင် နာဂါအီစံနှင့်ပတ်သက်၍-
"နာဂါအီစံသည် ဘုန်းတော်ကြီးဟန်ဆောင်လျက် ဂျပန်ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ကြီးနှင့် အတွင်းကျကျ ဆက်သွယ် နေသည်။ ရန်ကုန်တွင် သူ့ကို ခပ်ကြောင်ကြောင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ် နားလည်ထားကြသည်။ သို့သော်လည်း သူသည် လူသိများသည်။ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဘုရားပေါင်းစုံသို့ လှည့်လည်သွားလာနေပြီး သူ့ထံ ၀ိုင်းအုံလာသော လူအများကို ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်ရင်း ထူးထူးဆန်းဆန်း ခေါင်းလောင်းကလေးတစ်ခုကို တီးပြတတ်သည်။
သို့တိုင် ထိုသူကား ဂျပန်ထောက်လှမ်းရေးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဒေါက်တာသိမ်းမောင်နှင့် ရင်းနှီးသူလည်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဇာတ်လမ်းတွင် နာဂါအီစံပါဝင်သည့်အခန်းမှာ သေးငယ်၍ လျှပ်တပြက်သာ ပါဝင်ခဲ့သော် လည်း နောက်ပိုင်း ဇာတ်အချိတ်အဆက်များအတွက် သူသည် အဓိကနေရာမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။ သူ့အနေနှင့် ရဟန်တပါးဖြစ်သည့်အလျောက် မြန်မာအိမ်များတွင် ဆွမ်းခံနိုင်သည့်အတွက် မည်သူမျှ သူ့ကို သံသယမရှိကြပေ။ ထိုနည်းဖြင့် ဒေါက်တာသိန်းမောင်နှင့် ကာနယ် စူဆူကီးတို့အကြားတွင် ဆက်သွယ်ပေးခဲ့သည်။" ဟူ၍ ရေးသားဖော်ပြထားလေသည်။
အင်္ဂလန်ပြည်ရှိ အိန္ဒိယပိုင်းဆိုင်ရာ စာကြည့်တိုက်မှတ်တမ်းထဲ၌လည်း မြန်မာနိုင်ငံရှိ 'ဂျပန်လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်း'
Posted by Aung Htet at 7:49 AM0comments
လွမ်းတနင့်နင့်နှင့် တစ်ပြည်မှာ ညအခါနိုးခဲ့ရပြီ။ ။
(ပန်းကလေးတွေကြွေသလို အသက်တွေ မဆုံးရှုံးကြရပါစေနဲ့ဟု)
သရုပ်ဖော်ပန်းချီအား ဤနေရာမှ ယူပါသည်။
Posted by Aung Htet at 7:38 AM0comments
Labels: ဇော်ထက် (ပျဉ်းမနား)
"စည်းကမ်း" ဟူသည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၊ လူမျိုးတစ်မျိုး၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ စံပြုစရာ မှတ် ကျောက်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတစ်ခု၏ လူ့နေမှုအဆင့်အတန်း၊ ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်အတန်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု တို့ကို သိလိုပါလျှင် ထိုနိုင်ငံ၏ သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများကို တိုင်းသူပြည်သားများ မည်သို့မည်မျှ လိုက်နာကျင့်သုံးကြသည်ကို ကြည့်ရုံဖြင့် ယေဘူယျအားဖြင့် သိရှိနိုင်ကြပေသည်။ ထို့ ကြောင့်နိုင်ငံ၊ လူမျိုး၊ အသင်းအဖွဲ့များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် အရေးကြီးဆုံးသောအရာများထဲတွင် စည်း ကမ်းသည်လည်း အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လျှက်ရှိသည်ကို မိဘပြည်သူများအားလုံး လက်ခံကြလိမ့်မည် ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ နာရေးကူညီမှုအ သင်း(ရန်ကုန်)သည်လည်း အများပြည်သူ အား ကူညီနေသော၊ တိုင်းပြည်၏ တာဝန်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအား မျှဝေထမ်းပိုးနေသော မိဘပြည်သူ အပေါင်းတို့၏ နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရသော လူမှုဒုက္ခများကို မျှဝေခံစား ကူညီဖေးမနေသော အသင်းအဖွဲ့ တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အညီ ထို "စည်းကမ်း" ဟူသော လူသားတိုင်း လိုက်နာကျင့်ကြံကြရမည့် "စံ" တစ်ခုအား လက်ကိုင်ပြုကာ ကူညီပေးဆပ်လာခဲ့သည်မှာ (၁၂) နှစ်ခရီးအား ကျော်လွန်လာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၆) ရက်နေ့တွင်လည်း ကျွန်တော်တို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ အသင်းသူ/သားများနှင့် အများပြည်သူတို့အတွက် "စံ" ပြုစရာလေးစားအားကျ အတုယူဖွယ်ရာ စည်းကမ်း တစ်ခုအား မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတော့သည်။ ယနေ့ နေ့လည် (၁၁းဝဝ) နာရီခန့်တွင် နာရေး ကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) အမှတ် ၁၃/က၊ ဗိုလ်မှူးဗထူးလမ်း၊ ၄၂ ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်သို့ အင်္ဂလန် နိုင်ငံ (Oxford University Student Union) မှ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဥက္ကဌ (David J.Townsend) ဦးဆောင်၍ နိုင်ငံပေါင်းစုံမှ ကျောင်းသား/သူများ ပါဝင်သောအဖွဲ့သည် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ နာရေးကူညီ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းတွင် လူနာများအား ဆေးကုသ ကူညီဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ သုခအလင်းစာကြည့်တိုက်နှင့် သုခအလင်းပညာဒါန သင်တန်းများတို့အား စိတ်ဝင်တစား လေ့လာကြည့်ရှု့ကာ သိလိုသည့်အချက်များအား စိတ်ဝင်တစားမေးမြန်း မှတ်သားနေခဲ့ကြ သည်။ ၄င်းကျောင်းသားများအဖွဲ့တွင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂဥက္ကဌ၏ လက်ထဲတွင် ပီနံလက်ဆွဲအိတ် (၁) လုံး အားသွားလေရာတွင် လက်မှမချစတမ်း ဆွဲကိုင်ထားသည်ကို အမှတ်တမဲ့ တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ကျွန်တော်တို့ အနေဖြင့် ၄င်း၏ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတစ်လုံးဖြစ်မည်ဟုသာ ထင်ခဲ့မိလေသည်။ ကျွန်တော်တို့အသင်းမှ တာဝန်ရှိသူများ အသင်းသူ/သားများမှ ၄င်းတို့အား လိုက်လံရှင်းပြ နေကြသောအချိန်တွင် ကျောင်းသား တစ်ဦးမှ ၄င်းသောက်နေသည့် လက်ထဲမှ ရေသန့်ဘူးခွံနှင့် အမှိုက်တစ်ရှုးစများအား ၄င်းအိတ်ထဲသို့ထည့် လိုက်သည်ကို မထင်မှတ်ဘဲ တွေ့မြင်ခဲ့ရသဖြင့် သိလိုသောစိတ်ဆန္ဒကြောင့် မေးမြန်းကြည့်ရာတွင် ၄င်းတို့ သွားလေရာတွင် အသုံးပြုသော ဘူးခွံ၊ ပုလင်းခွံနှင့် အမှိုက်များအားထည့်ရန်အတွက် ၄င်းတို့သွားလေရာ တွင် အမြဲတမ်းယူသွားလေ့ရှိကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် အတုယူဖွယ်ရာ တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတော့သည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)အနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့၏ အသင်းအဖွဲ့ အား ယခုကဲ့သို့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ (Oxford University Student Union)မှ ကျောင်းသူ/သားများ စိတ်ဝင် တစား လာရောက်လေ့လာခြင်းအတွက် ဂုဏ်ယူမိသလို ၄င်းတို့ထံမှ လေးစားအတုယူဖွယ်ရာ စည်းကမ်း တစ်ခုအား တွေ့မြင်ကြရသည့်အတွက်လည်း များစွာဂုဏ်ယူမိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်သူလူထု တို့အနေဖြင့်လည်း မိမိတို့၏အမှိုက်များ၊ မိမိတို့ အသုံးပြုနေသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ယူ၍ နိုင်ငံကြီးသားပီသခဲ့ကြသော ကျောင်းသားလူငယ်လေးများအား အတုယူကာ နှစ်ပေါင်း (၆ဝ) ခန့် ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျ ကျန်ရစ်ခဲ့သော ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသူ/သားများ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ အနေဖြင့်လည်း ယခုကဲ့သို့ စံပြုစရာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ (Oxford University Student Union)ကျောင်းသား/သူများ၏ စည်းကမ်းလေးအား စံနမှုနာယူ၍ တိုင်းပြည်နိုင်ငံတိုးတက်ရေး၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းများတိုးတက်ရေး၊ လူမှုအကျိုးပြုအဖွဲ့အစည်းများ တိုးတက်ရေးအတွက် "စည်းကမ်း" တစ်ခု အားစံပြု၍ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယူနိုင်ကြရန် ရည်ရွယ်၍ ခေါင်းစဉ်လေးအား "ဟိတ်! ကိုယ့်တာဝန် … ကိုယ်ယူ" ဟူ၍ ကျွန်တော် ကင်ပွန်းတပ်မိပါတော့သည်။
Posted by Aung Htet at 7:18 AM0comments
ယခု ၂ နှစ်ပြည့်ပွဲတွင် ရွှေတွံတေးဆရာတော်က......" လူတိုင်းတနေ့ သေရမှာပဲလို့ သိထားပါ - ဒီသေမယ့်အသိကို မပြတ်ဆင်ခြင်နေရင် ကမဌာန်းဖြစ်ပြီ - သေသေချာချာမှာ ချင်တာက အစွဲအလန်းမထားကြဖို့ ပဲ ဒီလို့ ကြမာဆိုးနဲ့ သေရင် ဧကန်မုချ မကျွတ်ဘူး အစိမ်းသေတာ စသဖြင့် သူပြောငါပြော အရပ်ပြောတွေကို မယုံဖို့စိတ်မဆင်းရဲကြဖို့ အရေးကြီးတယ် ဘယ်လိုနည်းနဲ့ သေသေ - သူကံအတိုင်းပဲသွားရမှာ သုဂတိ ဒုဂတိ လားကြရမှာ - ကြမာဆိုးနဲ့ ကြုံတဲ့ အရိယာတွေတောင်ရှိပါတယ် - ဗုဒတရားမှာ အထင်အရှားရှိတယ် - ဒါကြောင့် တထစ်ချမစွဲလန်းပဲ ကုသိုလ်တွေသာများများပြုကြပါ။
နောက်တခုက ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေ လျော်ကြေးငွေရဖို့ ကိစ္စကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေကြတဲ့ အဖွဲ့ တွေကိုမေတာ ရပ်ခံချင်တယ် ထိရောက်အောင်လည်းလုပ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လည်း လုပ်ပေးကြပါ တိုက်တိုက်တွန်းတွန်းပေါ့ အခု ၂ နှစ်ကြာပြီ ဘာမှမရသေးဘူး = ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေ ပကတိအခြေအနေ ကိုကြည့်ပြီး နာမည်ရရုံ အလုပ်ဖြစ်ရုံ ငွေကုန် မခံစေချင်ဘူး .......... စသဖြင့်မိန့် ကြားခဲ့သည်။
Posted by Aung Htet at 7:01 AM0comments
Maung Paris - Learning French # 8
VERBE " ETRE " နှင့် သက်ဆိုင်သော သုံးစွဲပုံများ
J'ai une voiture . ရေ အယူးန်း ဗွားကျူး ။ ကျနော့်မှာ ၊ ကျမ မှာ ကားတစီး ရှိသည်။
J'ai une belle voiture. ( ဆိုတာကတော့ နာမဝိသေသန Adjectif ဖြစ်ပြီး နာမ်ရဲ့ ရှေ့(သို့) နောက် မှာထားရပါတယ်) ကျနော့်မှာ ၊ ကျမ မှာ လှသော ကားတစီး ရှိသည်။( အမနာမ် အတွက် နာမဝိသေသန)
Je regarde le ciel bleu. ရ ရဂါဒ် လ စီးယဲလ် ဘ လားလ် ( အသံထွက်မှန်ရေးမရပါ)ပြာသော ကောင်းကင်ကို ကျနော် ကြည့်သည်။
belle ဘဲလ် ( လှပသော) grande ဂရောင်းဒ် ( ကြီးသော) rapide ရားပိဒ် (မြန်သော)
verte ဗက်ထ် ( အစိမ်းရောင်ရှိသော) noire နွား ( အနက်ရောင်ရှိသော)
ဥပမာ -- Une voiture noire. အယူးန်းဗွားကျူးနွား ၊ အနက်ရောင်ကားတစီး
နာမဝိသေသန များကို သက်ဆိုင်ရာ နာမ်နှင့်တွဲ သောအခါ အထီး ၊အမ မှန်ကန်အောင်ချိန်ညှိ ၊
သာမန် အားဖြင့် နာမဝိသေသန Adjectif ရဲ့ အနောက်မှာ အမနာမ် အနည်းကိန်းဖြစ်လျင် "e"ထည့်ပေးခြင်း ၊ အမနာမ် အများကိန်းဖြစ်လျင် " es " ထည့်ပေး ခြင်း ကို လုပ်ပေးရပါမည်။(ပြောင်းနည်း ဝိသေသ များရှိသည်)
ပြီးခဲ့သော သင်ခန်းစာများတွင် ရှင်းပြခဲ့သလို နာမဝိသေသန Adjectif များကို အဖိုနာမ် မှ အမ နာမ် သို့ ပြောင်း ရန် အများစုမှာ "e" ထဲ့ပေး၍ ရသည်။ သို့သော်"e" ဖြင့်ဆုံးသော အချို့ကို ဘာမှ မပြောင်းရပါ ။ အချို့သည် လုံးဝ ကွဲ ပြားသွားသော စာလုံးများလည်း ဖြစ်သွားတတ်ကြပါသည် ။ ထို့ကြောင့် ပါရီမောင် မှ ဖြည့်စွက်၍ ပေးထားပါသည် ။ စာလုံး နောက် မှအနီရောင်ဖြင့် ဖေါ်ပြထားသော စာလုံး ကို ထပ်ထဲ့ပေး ခြင်း ဖြင့် အမနာမ် သို့ ပြောင်းလဲသုံးပါ ။ အနီရောင် စာလုံး အသစ်သည် လုံးဝ ကွဲပြားသော စာလုံး တခု ဖြစ်သွားသည်။ ဥပမာ -- beau မှ belle
( အလားတူစွာပင် အများကိန်းကို ပြောင်း ရာတွင်လည်း " s " ပေါင်းခြင်း ၊ မတူသော စာလုံးများသို့ ပြောင်းသွားခြင်းများရှိ ပါသည် ) အခန်းတခု အနေနှင့် ဖေါ်ပြပါမည်။
C'est beau. လှတယ် (အရာဝထ္တု ၊ ရာသီ ဥတုကို ပြောသည်) Il fait beau.ရာသီ ဥတုသာယာတယ်
bruyante ဆူညံသော C'est bruyant . ဆူညံတယ်၊ နားငြီးတယ် C'est .... (ဖေါ်ပြပြီး )It is ...
chaudeပူအိုက်သော Le café est chaud. Le riz est chaud.ထမင်းပူတယ်
difficile ခက်ခဲသော difficille C'est difficile à dire. ပြောဖို့ခက်တယ်
en colère စိတ်ဆိုးသော Il est en colère. သူစိတ်ဆိုးနေတယ်။ Papa est en colère.
frais လတ်ဆတ်သော၊ အေးသောfraîche. Les poissons sont frais.ငါးများလတ်ဆတ်သည်။
grand et petit မြင့်သော ၊ကြီးသော ၊ petit သေးငယ်သော grande , petite ( အသံများကိုd နှင့် t ထိ ထွက်ပါ)
lente နှေးကွေးသော Le bus est lent. ဘတ်စ် ကားသည် နှေးသည်။
riche ချမ်းသာသော Vous êtes riches . ခင်ဗျား(တို့)က ချမ်းသာတယ်
VERBE " ETRE " သည် ရှိသည်၊ ဖြစ်သည် ဟု အဓိပ္ပါယ် ရပြီး လောလောဆယ် အခြေအနေ တွင် ဖြစ်ခြင်းပြ စာကြောင်းများ တည်ဆောက် ရာတွင် သုံး ရပါသည်။
ကတ္တား Subject + ကြိယာ Verb " ETRE " + နာမ် Noun သို့မဟုတ်Adjectif နာမဝိသေသန
Je suis médecin. ( + Noun ) ရ စွီ မေ ဒ ဆန် ။ ကျနော် ဆရာဝန် ဖြစ်သည်။
Je suis patient(e). ( + Adjectif ) ရ စွီ ပါ့ စီယွန့် ကျနော် သည် စိတ်ရှည်တတ်သည်။ ဒီနေရာမှာ အရေး ကြီးပါသည်။ Adjectif ကို သုံးစွဲ ပြောဆိုတိုင်းချိန်ညှိခြင်း Accord ပြုလုပ်ပေးရပါမည်။ ပြောသူသည် မိန်းကလေး ဖြစ်ပါက Je suis patiente. ရ စွီ ပါ့ စီယွန့် ထ်၊ ဟုပြောရပါမည်။ " t " သံထွက်ပါ
Elle est étudiante. ( + Noun ) အယ်လ် လေ အေတူ ဒီ ယွန့်ထ် ။ သူမကျောင်းသူ ဖြစ်သည်။ ဒီနေရာမှာတော့ ရှင်းပါသည်။ သူမ ဟုဆိုထားတာဖြစ်လို့ étudiante ဆိုပြီး ဖြစ်ရပါမယ်။ " t " သံထွက်ပါ
Ils sont gentils. ( + Adjectif ) အီလ် စွန့်န် ရွန်းတီးရ်။ သူတို့ကြင်နာတတ်သည်( သဘောကောင်းသည်)။ အများကိန်းဖြစ်၍ Adjectif တွင် " s " လိုက်ပေးရမည်။
" .... tille "သည် " ရ " သံ
VERBE " ETRE " ရဲ့ Conjugaison ကို ပြန်လည် နားထောင်၊ ရွတ်ဆို လေ့ကျင့်ရန် လင့်
VERBE " ETRE " နှင့် VERBE " AVOIR " တို့၏ ကွဲပြားသော အသံတို့ကို ဂရုမစိုက်မိပါလျင် မိမိ ပြောလိုသော အဓိပ္ပါယ်သည် လုံးဝ လွဲချော်သွားပါမည်။
VERBE " ETRE " အတွက်
Ils sont ...... အီလ် စွန့် ၊ သူတို့ သည် ... ဖြစ်ကြသည် ( " s " ၂ လုံး ထပ်သောနေရာ၏ အသံသည် " s " သံ ထွက်ရမည်။)
Elles sont ..... အလ် စွန့် ၊ သူမတို့ သည် ... ဖြစ်ကြသည် ( " s " ၂ လုံး ထပ်သောနေရာ၏ အသံသည် " s " သံ ထွက်ရမည်။)
VERBE " AVOIR " အတွက်
Ils ont .... အီလ် ဇွန့် ၊ သူတို့မှာ ... ရှိကြသည် ( " s " ၁ လုံး ထဲရှိသောနေရာ၏ အသံသည်" Z " သံ ထွက်ရမည်။)
Elles ont ...... အလ် ဇွန့် ၊ သူမတို့မှာ ... ရှိကြသည် ( " s " ၁ လုံး ထဲရှိသောနေရာ၏ အသံသည် " Z " သံ ထွက်ရမည်။)
ယခု သိရှိပြီးဖြစ်သော VERBE " ETRE " နှင့် VERBE " AVOIR " တို့ကို သုံးပြီး လေ့ကျင့်ခန်းများများ လုပ်နိုင်လေလေ ပိုပြီး အခြေခံ ကျေညက်လေလေ ဖြစ်ပြီး အချိန်ကာလကို ပြဆိုသော ဝါကျ များ ပြုလုပ်သောအခါ